warkii.com » Deni oo si weyn u amaanay madaxweyne FARMAAJO
Deni oo si weyn u amaanay madaxweyne FARMAAJO
Dhuusamareeb (warkii.com) – Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo hadal ka jeediyey shirkii Dhuusamareeb ayaa muujiyey debacsanaan aad uga weyn markii loo eego hadalladiisii hore.
Deni ayaa sheegay in markii ay la fariisteen madaxda federaalka ay wax badan oo horay u jiray meesha ka baxeen.
“Kala taagnaan badan ayaa horay u jirtay ‘guura-raac iyo caruur waa loo kala sheekeeyaahe’ markii la wada fariistay runtii wax badan ayaa meesha ka baxay” ayuu yiri.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay kulamadii uu la yeeshay madaxda dowladda federaalka, isla markaana si niyad sami leh loo wada dareensanaa marxaladaha uu haatan dalku marayo.
“Waxaa la wada dareensanaa in marxaladan dalku uu marayo loo baahanyahay midnimo qaran, dooda dheer kadib arintaasna waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda federaalka oo runtii muujiyey dulqaad iyo odaynimo, oo aan dhihi karo wanaaga gogoshan isagaa iska leh” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in xildhibaanada federaalka ay ka mid ahaayeen dhicanyada ay siyaasadda isku hayeen, balse hadda ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan.
“Kursigu waa iska macaanyehee xildhibaanadu hadey rabaan inay sii joogaan, waan kala shaqeyneynaa, laakiin waxaan rajeynaa in aysan doorashada ka baqin” ayuu yiri madaxweyne Saciid Deni.
Deni ayaa carabka ku adkeeyey in danta dalka ay doorashada ku jirto “Galmudug hadeysan doorasho ka dhici laheyn dhawr bilood ka hor, quruxda ay maanta leedahay ma aysan yeelateen, waxaan rajeynayaa in doorashada aan laga baqin waxaase muhiim ah talaabo kasta oo la qaadayo inay wada ogol ahaato” ayuu yiri.
Deni ayaa ku kaftamay “Waxaan rajeyneynaa in madaxweynuhu uu kursiga noo sii joogo oo tartanka uusan ka baqin, anaguna aan hareeraha qabano.”